थाहा छ ? साडि लगाउँदा महिलाहरुले गर्छन् यी ५ गलत काम, जसले महिलालाई देखाइदिन्छ कुरुप ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/थाहा छ ? साडि लगाउँदा महिलाहरुले गर्छन् यी ५ गलत काम, जसले महिलालाई देखाइदिन्छ कुरुप !
काठमाडौँ । साडी एक नेपाली परम्परागत पोशाक हो जुन प्रत्येक युवतीले लगाउन मनपराउँदछन्। जमाना जति बद्लिए पनि साडी लगाउने परम्परा अझै पुरानो भएको छैन। साडी लगाउँदा सबै नारीलाई पूर्ण महिलाको रूपमा देखिन्छ, जसले, संस्कृति र विश्वास प्रति सम्मान झल्काउछ । साडी प्रायस् जसो विवाह, पूजा र अन्य समारोहहरूमा महिलाहरूले लगाउँदछन्। साडी लगाउदा हरेक महिलालाई फरक देखिन्छ। जमानाको हिसाब अनुसार साडी लगाउने तरिका जरुर बद्लेको छ ।
चाहे ग्ल्यामर वल्र्ड हो या राजनिती साडी जसले पनि जुन क्षेत्रमा काम गरेपनि लगाउने गरेको पाइएको छ ।
कलिउडले विश्वभरि साडी लगाउने प्रवृत्ति बढाएको छ।तपाईले बलिउडमा त देख्नुभएकै होला कंगना रनौत, रेखा र विद्या बालन जस्ता धेरै अभिनेत्री साडीप्रतिको प्रेमका लागि परिचित छन्। खैर, त्यहाँ ठाउँ अनुसार साडी लगाउने तरीका र अभ्यास फरक छ। साडी लगाउनु सजिलो काम होइन। यदि यो राम्रोसँग लगाइदैन भने यो धेरै खराब देखिन्छ। हामी तपाईंलाई साडी लगाउनको सही तरीका बताउँदछौं जसले साडीको लुक र तपाईंको लुक बढाउछ ।धेरै गहनाहरु लगाउनु हुँदैन साडी लगाउँदा, धेरै गहनाहरू नलगाउने कोशीश गर्नुहोस्। साडी अनुसार गहना लगाउनुहोस्। यदि साडी भारी र चम्किलो छ भने गहना थोरै लगाउनु पर्छ। गहना कहिल्यै धेरै लगाउँनुहुँदैन नत्र साडी देखिदैनन्। बढी गहनाहरू लगाउदाँ गहनाले साडीको रंग र डिजाईनलाई लुकाइदिन्छ। यस्तो अवस्थामा साडी लगाउनु बेकार हुन्छ।
साडी लगाउन सही तरीका छनौट गर्नुहोस्
कसैलाई साडी लगाएको देखेर तपाईले पनि लगाउन नथाल्नुहोस्। पहिले यसलाई लगाउने विधिमा जानुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् र यसलाई लगाएर हिंड्नुहोस्। कम्मरका अनुसार साडी लगाउनुमा पनि फरक देखिन्छ। त्यसैले यो कुरालाई दिमागमा राख्नुहोस् कि कम्मर भन्दा माथि कति राख्ने र कम्मर भन्दा तल कति । यसलाई नाभिको माथिपट्टि वा मुनि बाँध्नुहोस् यसले पनि एक फरक दृश्य दिन्छ। त्यसैले साडिलाई सँधै सहि तरिकाले लगाउनुहोस् ।
म्याच हुने खालको ह्यान्डब्याग र ब्यागहरू बोक्नुहोस्
साडी लगाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, ह्यान्डरहरू वा ह्रयान्ड पर्स र ब्याग यससँग कसरी म्याच हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दछ। जब साडी नयाँ छ, ब्याग पनि नयाँ हुनुपर्दछ। हुनसक्छ भने, साडीको रंगको आधारमा ह्यान्डपर्स बोक्नुहोस्।
साडीको साथ उत्तम स्लीपरहरू
सबैलाई थाहा छ कि साडी लगाए पछि, खुट्टा तल देखा पर्दछ, तर अझै तपाईले यस्तो चप्पल छनौट गर्नु पर्छ जुन साडीसँग सुहाउँछ। यदि साडी मिल्ने फुटबियर छ भने, यो साडी को सुनमा सुगन्ध जस्तो हुनेछ।
ब्लाउजको सही चयन गर्नुहोस्
सुन्दर साडीहरू पनि राम्रो ब्लाउज बिना बेकारका देखिन्छन्। यदि ब्लाउज साडी को मिल्दो अनुसार छ भने, तब साडी को लुक बाहिर आउँछ। साडीका अनुसार ब्लाउजको फिटिंग पनि सहि हुनुपर्छ। ब्लाउज बाहेक साडीको अर्को महत्वपूर्ण अंश पेटीकोट हो। साडीको अनुसार पेटीकोट पनि छनौट गर्नुहोस्। बिभिन्न रंगको साड़ी र पेटीकोटहरू हुनुहुदैन ।